Njengoko usuka eSiliguri usiya eSikkim, uya kudibana nedolophu encinci ebizwa ngokuba yiRanipool. Indawo yokuhlala imalunga nemizuzu engama-40 ukusuka apha. Ungacela umqhubi ukuba athathe ilungelo ukusuka eRanipool ekujikeni kwaye aqhubele e-Assamlingzey. Ukuba ujongene nabuphi na ubunzima, ndicela unditsalele umnxeba.
Iinkcukacha zeGumbi le-Cottage:
Igumbi lokuhlala linegumbi elinye elihlala abantu ababini. Inebhedi ephindwe kabini, isofa, iwardrobe, iitafile ezisecaleni, idesika yokubhalela, ibalcony kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Isithuba esipheleleyo senziwe ngezinto ezifumaneka kwindawo ezifana nemithi kunye ne-bamboos. Umgangatho wonke kunye nesilingi zenziwe ngamaplanga.
Imozulu ishushu kwaye inelanga amaxesha amaninzi. Kuhlala kubanda ebusika (Okthobha-Februwari). Nceda uphathe iimpahla ezifudumeleyo ukuba uceba uhambo ngala maxesha. Zonke ezinye iinyanga imvula kakhulu, nangona kuya kuba nelanga ngexesha lemini. Nangona kunjalo, kufuneka uphathe iambrela xa ucwangcisa ngezi ntsuku.